“Tanora vanona sy mandray andraikitra no tanjona” hoy ﻿Atoa Minisitra Jean Anicet Andriamosarisoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nivalona ny taona 2017. Mbola tsy nanao ny tatitry ny asa vitan’ny MJS ianao Atoa Minisitra. Rahoviana no ho tontosaina izany ?
Marina izany fa ho tontosaiko amin’ny 2 febroary izao ny tatitra. Mandritra ny fotoan’ny fambolen-kazo no hanaovana izany. Ny fitsitsiana no miteraka io fomba fiasa vaovao io. Ny olana dia tsy afaka manolotra ny mari-boninahitra ny Minisitera amin’io fotoana io. Kanefa dia ambarako fa amin’ny taona 2018 dia hanolotra mari-pankasitrahana manokana ho an’ireo atleta tranainy mendrika ny Minisitera
Vaovao lehibe izany. Rahoviana no hanaovana izany ?
Eo ampandaminana ny fandaharam-potoana ny Minisitera ankehitriny. Mendrika hahazo izany ireo atleta ary hahazo ny anjara tandrify azy koa ireo mpiasan’ny Minisitera.
Raha ny mikasika ny spaoro dia mila ho takon’ny olana toa gidragidra eo amin’ny resaka fifidianana ny tontolon’ny spaoro…
Raha sitrakao hiverenako io rehefa amin’ny farany fa aleo ny tontolon’ny tanora no hanombohako ny resaka. Maro ny zava-nisongadina ho an’ny tanora. Tanisaiko ny santionany :
- Ny volana marsa 2017 no nampahafantarina ny Politika nasionaly ho an’ny Tanora (PNJ). Zava-dehibe io. Ity taona taona ity no manomboka ny tetika fampiharana (plan d’action).
- Raha mikasika ny Confejes indray dia tsara ny vokatra satria 100% ny vokatra azon’ny tanora tetikasa 10 no napetraka aty samy nahazo famatsiana avokoa
- Tafapetraka ny Filankevitra nasionalin’ny tanora (Conseil National de la Jeunesse)
- Tontosa ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora natao tany Fianarantsoa. Azo alain-tahaka iny hetsika iny satria maro ireo fiofanana nomena ny tanora tany (momba ny serasera, fahasalaman’ny tanora, kolontsain’ny fandraharahana, mikasika ny asa, fandrafetana tetikasa…). Soritako fa tahaka izay koa no tokony ho natao ho an’ny tanora vehivavy tany Morondava izay voatery nofoanana noho ny resaka pesta.
- Misy ny fanabeazana ny tanora mba tsy ho tratry ny vohoka aloha loatra, ny fanentanana tsy hiroso amin’ny fanambadiana aloha loatra izay iantsorohan’ireo tanora Jeunes Ambassadeurs.
- Misy ireo tetikasa toy ny fanabeazan-tsahala na antsoina hoe “tanora manetsika tanora” (Jeunes Paires Educateurs).
- Ny hahatonga ny tanora ho olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra no tanjona ka nisy ny fanaovan-tsonia niaraka amin’ny CENI fifanarahana entina hampandraisana andraikitra ireo tanora Malagasy amin’ny zotram-pifidianana. Marihiko fa amin’izao fiandohan’ny taona 2018 izao dia miezaka ny MJS handresy lahatra ny PNUD hanatevina io fifanarahana io. Ho hita eo ny tohiny.
Ankoatran’ny herin’ny Fanjakana malagasy dia maro ireo mpiara-miombon’antoka sy mpanohana nafahana nanao ireo asa ireo ka ohatra amin’izany ny UNFPA, PNUD, UNICEF, BIT… sy ny maro hafa.
Raha itodihana kosa ny momba ny fanatanjahantena ? Inona ny vokatra ?
Raha ny vokatra no jerena dia tsy azo ampitahaina amin’ny 2016 ny vokatra 2017 satria ny 2016 dia nisy ny CJSOI natao teto Madagasikara izay nahazoantsika vokatra tsara. Fa tsy mitsanga-menatra isika Malagasy raha mijery ny vokatra azon’ireo atleta tamin’iny taona 2017 iny. Nahazo tompondaka eran-tany ny junior taranja tsipy kanetibe, tompon-daka lefitra maneran-tany ny vehivavy. Nahazo anaram-boninahitra isika teto Afrika (jeux d’echec, fiba 3x3). Nahazo vokatra tsara isika tao Afrika teo amin’ny taranja tenisy, ady totohondry, rugby olona 7, fibatana fonjamby… Maro ny vokatra raha ny teto anivon’ny Ranomasimbe Indianina. Ireo tanora ireo dia noraisin’ny filohan’ny Repoblika ny faran’ny volana desambra 2017 teo ary nahazo mari-pankasitrahana avy amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Manao ahoana indray ny fanofanana an’ireo atleta Malagasy ?
Ny Minisitera dia manofana ireo mpiasa ato aminy. Miezaka manome fiofanana ho an’ny mpanabe amperinasa.
Manaraka izany anjaran’ny federasionina tsirairay ny manofana an’ireo atleta sy mpanabe mba hahazo vokatra tsara. Midera manokana ireo mpiandraikitra klioba ny tenako. Fantatro fa volabe no lanin’izy ireny ary matetika tsisy tamberiny ara-bola fa hasambarana mitaiza tanora no azo. Ny anjaran’ny Minisitera dia manamora ny fivoahana sy mikolokolo ny fifandraisana amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Raha mikasika ny fiofanana dia vao teo ny Minisitera no nandray ireo judoka hiofana any Japana. Misy koa ireo atleta 90 handeha any Chine ka coach 10 ary atleta avy amina taranja 5 (ping pong, atletisma, lomano, badminton, fonjamby) izany hoe taranja manavanana ny sinoa no hisitraka izany. Efa hita soritra any koa ny anaran’ireo karateka ho an’ny Japana ihany koa… fa aleo ho avy ny fotoana hilazana izany amin’ny fomba ofisialy.
Marihina fa tsy hoe fitiavana te handefa atleta any ivelany no tanjona fa ireo atleta tohan’ny MJS dia mazava be ny tanjona (handray anjara mavitrika amin’ny Championnat d’Afrique 2018, manomana ny lalaon’ny Nosy, mikendry ny ho voafantina handray anjara amin’ny Lalao olimpika (qualification).
Mandefa atleta hiofana aman-taonany any ivelany isika ary ahoana indray ny momba ny fampifandraisana ny fianarana sy ny spaoro eto Madagasikara ?
Mitohy tokoa ny projet io. Matoa tsy nisy resabe angazety dia mizotra tsara ny asa. Amin’ny 4 febroary izao no rentrée officielle ho an’ireo tanora sady manao spaoro no mianatra ka ireo atleta taranja olon-tokana aloha no miditra ireo. Ny taranja iombonana ao aoriana kely.
Ny spaoro dia mila fotodrafitrasa. Ahoana kosa ny amin’io ?
Tena marina izany. Betsaka ireo fotodrafitrasa naorina tamin’iny taona iny. Misy ny vaovao, ao ireo teo aloha no nohatsaraina tanteraka. Mahajanga sady nahazo dobo filomanosana, Toliara hisy dobo filomanosana… Misy vita avy amin’ny alalan’ny Tetikasan’ny filoham-pirenena ary misy notontosain’ny MJS manokana. Manentana an’ireo mampiasa ireny fotodrafitrasa ireny hikajy azy. Izany indrindra aza no tsy nanomezana ny Kianja mitafo ao ankorondrano jo an’ny CENI satria tena simba loatra ny fotodrafitrasa taorian’izany.
Teny famaranana ny resaka Atoa Minisitra ?
Araka ny resaka natao teny ampiandohana dia hiverenako kely ilay momba ny fifidianana voalaza fa manaratsy endrika ny spaoro malagasy. Marina izany. Amin’izao fotoana izao dia andalam-pamolavolana ny lalana sy rijan-teny ny eto anivon’ny Minisitera miaraka amin’ireo mouvement sportif. Ny hisorohana ny disadisa no antony fa matetika dia noho ny tsy fanajana ny lalàna, na tsy fahafantarana na noho ny lalàna manjavozavo no miteraka ny olana. Tsy ho voavaly tsirairay eto ny momba ireo olana notanisainao ireo. Fa hafatra amin’ny ankapobeny no ampitaiko. Marihiko fa maro ny fifidianana hatrehina amin’ity taona ity misy 19 ireo taranja ireo. Koa hafatra ny ahy ny hoe hajao ny lalàna velona, hampanjakao ny toe-tsaina spaoro (esprit sportif) ary aza manaiky ho voarebireby sy anjakan’ny mpilalao politika ny tontolon’ny fanatanjahantena. Dia misaotra anareo nanasa.
Misaotra anao Andriamatoa Minisitra.
Nanangona : Ibalita sy Razafindramanitra